Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Ọmụmụ ihe ọhụrụ: Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụmụ nwanyị na-anata nchọpụta nhụsianya na-adịghị mma nke Vaginitis
BD (Becton, Dickinson na Ụlọ ọrụ) taa kwupụtara nsonaazụ nke nyocha nyocha nke ndị ọgbọ bipụtara na akwụkwọ akụkọ nke Obstetrics & Gynecology nke gosipụtara nchọpụta molecular nwere ike imeziwanye ihe ziri ezi nke nchọpụta vaginitis ma mee ka mkpebi ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị na oge kwesịrị ekwesị.
N'ime akwụkwọ ahụ, Arụmọrụ nke Vaginal Panel Assay Tụnyere na Clinical Diagnosis of Vaginitis - nke na-akọ nchoputa sitere na nyocha ụlọ ọgwụ BD - ihe atọ kpatara vaginitis (bacterial vaginosis [BV], vulvovaginal candidiasis [VVC] ma ọ bụ Trichomonas vaginalis [TV] ]) a mụrụ iji tụnyere ntule ndị dọkịta na nsonaazụ sitere na ule molekụla. Nnyocha ahụ chọpụtara na ma e jiri ya tụnyere ule molekụla, nchọpụta dọkịta na-atụfu pasent 45.3 nke ikpe dị mma (180 nke 397) ma chọpụta 12.3 pasent nke ikpe na-ezighị ezi dị ka ihe ziri ezi (123 nke 879).
A họrọkwara ọmụmụ ihe ahụ maka itinye aka na Obstetrics & Gynecology Journal Club, nke na-ahọrọ ihe ọmụmụ abụọ na atọ maka mbipụta ọ bụla iji nye ụmụ akwụkwọ ahụike ohere iji nyochaa akwụkwọ ndị dị ịrịba ama ma nyere ha aka ịmepụta ntọala maka omume dabeere na ihe àmà.
N'etiti nde 6 na nde 10 nleta nlekọta ahụike nke ụmụ nwanyị nọ na US metụtara ihe mgbaàmà nke vaginitis.1,2 Ọ bụ ezie na vaginitis bụ ọnọdụ a na-ahụkarị, nchọpụta nke ihe kpatara ya na-emekarị3,4 (BV, VVC, ma ọ bụ TV) na ụmụ nwanyị na-amụ nwa. A naghị ahazi afọ.
"Nchọpụta na-ezighị ezi pụtara ndụmọdụ ọgwụgwọ na-ekwesịghị ekwesị - ma ọ bụ ọgwụgwọ ma ọ bụ ọgwụgwọ," ka onye na-ede akwụkwọ na-ede akwụkwọ bụ Molly Broache kwuru, njikọ sayensị ahụike maka Integrated Diagnostic Solutions na BD. "Enwere ike ịgwa nwanyị ka ọ gaa nletaghachi na dọkịta na-adịghị mkpa, ma ọ bụ ọ nwere ike ịmalite ọgwụ mgbochi n'ihi na ọ na-aṅụ ọgwụ nje ndị ọ na-adịghị mkpa n'ezie."
Ọmụmụ ihe ahụ tụnyere nchoputa nke onye dọkịta na-ahụ maka ọrịa vaginitis na nsonaazụ nke nyocha panel nke ikpu emere na BD MAX ™ Sistemu, ule ahịa ọgwụ FDA nyere ikike nke na-eji nucleic acid amplification iji chọpụta ihe kpatara microbial nke BV, VVC na TV. Ọmụmụ ihe ahụ metụtara ndị sonyere 489 Symptomatic. Ndị sonyere na-enweta nchoputa ụlọ ọgwụ wee nweta swab nyocha nke ikpu n'oge nleta ha. E zigara swabs n'ụlọ nyocha dị iche ma emesịa tụnyere nyocha nke onye dọkịta.
"Anyị na-eme ụmụ nwanyị nsogbu ahụike mgbe anyị na-ejighị ngwá ọrụ kachasị mma anyị nwere iji chọpụta ihe kpatara ma ọ bụ ihe na-akpata mgbaàmà nke kpaliri ha ịchọ nlekọta ahụike," ka onye na-ede akwụkwọ na-ede akwụkwọ Barbara Van Der Pol, Ph.D kwuru. ., MPH na Prọfesọ nke ọgwụ na ahụike ọha. "Ọtụtụ nje na-ebute site na ọtụtụ ihe dị ndụ ka anyị chee na anyị nwere ike ịmata ha nke ọma na-enweghị nyocha nyocha dị elu. Ihe data dị n'akwụkwọ a na-akwado na anyị ji ụmụ nwanyị ụgwọ nhọrọ kacha mma dị na nyocha ụlọ ọgwụ ezughi oke."
BD MAX™ Vaginal Panel Assay nwere ike inye aka leba anya na njedebe nke nyocha ụlọ ọgwụ ma nwee ike inye aka melite nyocha nyocha. Nnwale a na-akpaghị aka nwere oge ntụgharị dị mkpụmkpụ (ihe dị ka awa atọ iji na-agba ọsọ n'etiti ihe nlele abụọ na 24 n'otu oge), ya mere nsonaazụ otu ụbọchị ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na onye dọkịta nwere ngwá ọrụ dị na saịtị. Emebere assay automation iji wedata mgbanwe na isi okwu, si otú a na-enyere aka ịbawanye izi ezi nke nyocha.
"Mgbe a na-achọpụta nwanyị n'ụzọ ọ bụla - gwa ya na ya enweghị vaginitis mana n'ezie na-eme ma ọ bụ gwa ya na ya nwere vaginitis ma ọ dịghị ebute ya - ọ na-emepụta ihe isi ike na ihe ize ndụ," Broache kwuru. "Ụmụ nwanyị kwesịrị ka mma."
Ọzọ na: Medicine
Ọgwụgwọ ọhụrụ maka Autism na Akwụkwụ na-adọ Medicine|
Red Ginseng na-ebelata ike ọgwụgwụ na nchekasị Medicine|
Ọgwụgwọ ngwakọta ọhụrụ maka nsogbu ọrịa shuga butere nke Cornea Medicine|
Mba Middle East na-elekwasị anya na njem nlegharị anya na-adigide ...